Ny keypad numeric dia navitrika rehefa namoaka KDM | Avy amin'ny Linux
Ny keypad numeric dia navadika rehefa namoaka KDM
Torohevitra mahaliana hitako ao GUTL ahafahantsika mampihetsika ny kitendry nomerika ao KDM (na dia manome toky aza ny mpanoratra azy fa raha mijery kely izy, dia azo ampiasaina amin'ny mpitantana Session hafa toa ny GDM o LightDM).
Ny tokony hataontsika dia ny mametraka ny fonosana numlockx:
Avy eo, amin'ny fampiasana mpamoaka lahatsoratra dia manitsy ny fisie / sns / kde4 / kdm / Xsetup
Manampy ity manaraka ity amin'ny faran'ny fisie
Raha ho ahy dia toy izao ny fisie:
Avy eo, mba hitsapana fa mandeha tsara ny zava-drehetra, dia averinay indray ny solosaina, ary rehefa mamoaka KDM, hampandeha antsika ny kitendry nomerika.
Azo atao fa amin'ny fizarana NoDebian hafa dia miova ny làlana Xsetup
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny keypad numeric dia navadika rehefa namoaka KDM
Izaho ve izany sa azo atao ao amin'ny menio preferences ihany koa? farafaharatsiny mba manana fidirana mandeha ho azy aho ary isaky ny miditra aho dia mavitrika amin'ny alàlan'ny default fa tsy haiko raha toa ka mety izany rehefa ao amin'ny manager session aho
Ao amin'ny Fedora, farafaharatsiny azonao ampiasana azy io amin'ny safidin'ny KDE, farafaharatsiny nampavako azy toy izao.
Tsy midika hoe azo namboarina ve ny KDE? Mbola manandrana mamono ny mozika fidirana ao Chakra aho ¬¬
Ralehilahy, efa nandeha tany amin'ny safidin'ny rafitra »fampandrenesana momba ny rafitra sy ny fampiharana» Loharan-hetsika »Sehatra fiasana KDE» Midira ary esory ny safidy Play Play Sound?
Ao amin'ny Chakra aho ary tsy miseho ny safidy "KDE Workspace> Access", fisehoan-javatra hafa, fa avelao amin'ny "safidin'ny mpilalao" ankehitriny ho "tsy misy output audio", ho hitanay ary misaotra anao
Tsy hitako ny fisie Xsetup 🙁
Hitako io 😛
Ao Sabayon dia ao amin'ny / usr / share / config / kdm
Pimagizer: fitaovana hanovana habe ny sarinao